के छोरी भएर जन्मनु पाप हो ? एस बि पाण्डेयको प्रश्न ! - Ek Jamarko
Home / विचार / के छोरी भएर जन्मनु पाप हो ? एस बि पाण्डेयको प्रश्न !
सायद नारी भए जन्मनु पाप होला । त्यसैले त नारीलाई आफनै जन्मदाताले पनि गिद्दे नजर लगाउन छोडदैन। बाटोमा हिंडदा एउटी महिलालाई जिब्रो पड्काएर जिस्काउनुमा पुरुषार्थ देख्छन यो समाजका पुरुष हरु । हरेक पुरुष अपवाद बाहेक आफ्नी आमा लाई भगवान मान्छन । ती नारी पनि त कसै कि आमा होलिन जसलाई चौबाटोमा एक पुरुषले अपमान गर्छ या एकान्तमा भेटाउदा बलात्कार गर्छ । के पुरुष नजरले आफ्नी आमा र अर्काकी आमालाई समान दृष्टीले हेर्न सक्दैनन् ? हुन त मातृ बलात्कार पनि नभएको कहा हो र । यहि समाज हो जहा सहोदर छोरा द्वारा आमा र सहोदर बाबु द्वारा छोरी वालात्कृत हुनु परेको छ । मैले यसरी आक्रोश पोख्नुको मतलब सबै पुरुष दोषी हुन भन्न खोजिएको होइन । सबै पुरुषले सबै युवती माथि गलत नजर पनि लगाउदैनन तर यहि समाजमा रहेका कोहि कोहि भने ठ्याक्कै “बोका भन्दा कम” हुदैनन ।
बोकाको परिभाषा दिईरहनु नपर्ला यहा ! बोकाको जात खुट्टा टेक्ने बित्तिकै देखि अगाडिका खुट्टा उचाल्न पनि सिक्छ रे !त्यो उसको जन्मजात धर्म होला ! प्रवृत्ति र परम्परा फरक कुरा हुन तेसैले त बोका ले आफ्नै कंधामा पिसाब गर्छ । म बाटोमा हिंडदा मलाइ केटाले जिस्काउदा म केही बोल्दिन किन कि मलाई केटा बोका भन्दा कम लाग्दैनन् ! बाटो हिडिरहेको युवती जिस्क्याउनु उनीहरुको नियति नै हो ! र मलाइ यो पनि थाहा छ कि एउटा बोको बाख्री देखदा मात्र हैन गाई देख्दा पनि चम्किन्छ त्यति मात्र होइन उसले आफ्नी दिदि बहिनि र आमा समेत चिन्दैन र निर्वाध हुतहुताउछ वात्तात्तताता गरेर ! तेसैले पनि बाटो हिड्दा पुरुषले बजाएको सिट्टी र चर्दै गरेको बोकाको चम्काई एकै हुन मेरो लागी ।
सामाजिक प्राणि मान्छेले सहबास लाइ कति सम्म दुरुपयोग गर्छ भन्ने कुरा समाजमा भैरहेका यौन दुर्ब्यबहार हरु मात्र लाइ नियाले पुग्छ । अझ पुरुष हरुको दिमागमा डेरा जमाएर बसेको एउटा कुरा बुझ्ने हो भने पुरुष सोच कति सम्म घटिया हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ! हरेक पुरुषले राम्री देखेकी नारीको कुमारीत्व (भर्जिनिटि) आंफुले तोड्न चाहन्छ तर आफुले बिहे गरेर ल्याउने श्रीमिती चाही पक्कै भर्जिन नै होस् कुमारी नै होस् भन्ने चाहन्छ ।केटा हरु किन कुरा बुझ्दैनन् आखिर! उनीहरु ले अरुको छोरी चेली लाइ लगाएकै नजर समाजमा रहेका अन्य पुरुष हरुले उनीहरुका चेली हरु लाइ पनि लगाईरहेका हुन्छन भनेर ?
आजको समयमा कुमारीत्व जोगिएका भर्जिन मान्छे कम नै हुन्छन किनकि कुमारीत्व अर्थात भर्जिनिटि एउटा प्राविधिक कुरा हो र सहवास नगरी पनि कुमारीत्व भंग हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । अन्य प्राबिधिक कारण बाहेक म अहिले सम्म भर्जिन छु सहवास गरेर मात्र कुमारीत्व भंग हुने हो भने म मेरो कुमारीत्व प्रति शत प्रतिशत बिस्वस्त छु ! तर साइकल चढ्ने लगायतका दैनिक कामको कारणले कसैको कुमारीत्व गुमेको छ भने उसलाई पनि चरित्र हिनको घानमा पिस्नु कति सम्म जायज कुरा हो ? मेरो आजको प्रश्न यहि हो।
हुन त पुरुष मानसिकता निकै परिवर्तन हुदै गैरहेको होला ! कतै कतै त एक रातको लागि श्रीमती साट्ने चलनले प्रश्रय पाउदै गैरहेको छ रे भन्ने पनि सुन्नमा आउछ ! सहवाश सबैलाई चाहिने अत्यावस्यक कुरा हुदै गैरहेको छ समाजमा ! अचेल नैतिक रुपमा गरिने सहवाश हरु बर्जित भएपनि पहिले जस्तो दण्डनीय छैनन् ! समाजले भर्खरै कालोमोसो दलेर गाउँ निकाला गर्न सक्दैन ! कानुन अनुसार उमेर पुगेपछि मन परेको व्यक्ति संग सहमतिमा सहवाश गर्न पाउने मार्ग सरकार ले कानुनमा नै उल्यख गरेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ ! फेरी पनि किन कसैलाई जबर्जस्ति गर्न उद्दत् छन् पुरुष हरु ?
स्वतन्त्र सुचना, समाचार र विचार हाम्रो प्रथामिकता - Jamarko !
के छोरी भएर जन्मनु पाप हो ? एस बि पाण्डेयको प्रश्न ! Reviewed by Durga Pangeni on अगस्त 28, 2017 Rating: 5
Wynn's first kadangpintar hotel 토토 casino in Las Vegas since nba매니아 opening its casinosites.one doors in 출장샵 1996, Wynn Las Vegas is the first hotel on the Strip to offer suchalarge selection of
31 मार्च 2022 को 6:34 am